China Pillow Block Bearings mpanamboatra sy mpamatsy |Xinri
●Ny fampandehanana fototra dia tokony hitovy amin'ny an'ny làlam-baolina lalina.
● Ny habetsahan'ny fanerena sahaza, tsy mila manadio alohan'ny fametrahana, tsy mila manampy tsindry.
● Azo ampiharina amin'ny fotoana ilana fitaovana sy kojakoja tsotra, toy ny milina fambolena, rafitra fitaterana na milina fananganana.
Ny fanerena sakana ondana dia tena variana amin'ny fitondràna baolina lalina.Ny peratra ivelany ivelany savaivony dia spherical, izay azo mifanandrify amin'ny mifanaraka concave spherical seza mitondra ny anjara asan'ny aligning.Ny enta-mavesatry ny boribory ivelany dia ampiasaina indrindra hitondrana ny enta-mavesatra radial sy axial mitambatra izay enta-mavesatra radial indrindra.Amin'ny ankapobeny dia tsy mety ny mitondra ny enta-mavesatra axial irery.
Ny savaivony ivelany dia spherical, izay azo ampidirina ao amin'ny concave spherical surface mifanaraka amin'ny seza mitondra mba hilalao ny alignment.Pillow bloc bearings no tena ampiasaina hitondra radial sy axial mitambatra entana, izay indrindra radial entana.Amin'ny ankapobeny dia tsy mety ny mitondra entana axial irery.
1.Low friction fanoherana, ambany hery fanjifàna, avo mekanika fahombiazana, mora ny manomboka;High precision, entana lehibe, fitafy kely, fiainana fanompoana lava.
2.Standardized habe, interchangeability, mora ny fametrahana sy ny disassembly, mora fikojakojana;Firafitra compact, lanjany maivana, habe axial kely kokoa.
3. Misy bearings manana ny fanatanterahana ny tena-aligning;Mety amin'ny famokarana faobe, kalitao maharitra sy azo itokisana, fahombiazana amin'ny famokarana avo lenta.
4. Ny fifindran'ny friction Torque dia ambany lavitra noho ny fanerena dynamic dynamic, noho izany ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny friction ary ny fanjifana herinaratra dia ambany;Ny fotoana fiaingana dia avo kely fotsiny noho ny fotoan'ny fikorontanan'ny fihodinana.
5. Ny fahatsapan'ny deformation mitondra amin'ny fiovan'ny enta-mavesatra dia kely noho ny an'ny hydrodynamic mitondra.
6. Axial habe dia kely kokoa noho ny nentim-paharazana hydrodynamic mitondra;Mahazaka enta-mavesatry ny radial sy ny enta-mavesatra mitambatra izy io.
7. Ny endrika tsy manam-paharoa dia afaka manatratra fahombiazana tsara amin'ny karazana entana isan-karazany;Ny fampandehanana mitondra dia somary tsy mahatsikaritra ny fiovaovan'ny enta-mavesatra, ny hafainganam-pandeha ary ny hafainganam-pandehan'ny asa.
Ny lesoka amin'ny ondana misy seza
1. Ny feo mafy. Noho ny hafainganam-pandeha ambony ny ivelany spherical mitondra amin'ny seza, dia hanao tabataba be rehefa miasa.
2. Ny firafitry ny trano mitondra dia sarotra. Mba hihaona amin'ny fampiasana ny karazana bearings, ny famolavolana ny mitondra trano dia somary sarotra, ary ny mitondra mitondra trano ihany koa dia mampitombo ny famokarana ny vidin'ny vokatra, ka ny ankapobeny vidin'ny avo kokoa ny entona boribory ivelany miaraka amin'ny seza.
3. Na dia tsara lubricated ny bearings, araka ny tokony ho napetraka, vovoka-porofo sy ny hamandoana-porofo, ary miasa ara-dalàna, amin'ny farany dia tsy nahomby noho ny harerahana ny mihodinkodina fifandraisana ambonin'ny.
Ny fametahana ondana dia matetika ampiasaina amin'ny fitrandrahana, metallurgy, fambolena, indostrian'ny simika, lamba, fanontam-pirinty sy fandokoana, milina fitaterana, sns.
teo aloha: Andiany fampidirana mitondra miaraka amin'ny UCP 200 mazava tsara
Manaraka: Wheel Hub Bearing
Mpanamboatra china mitondra UCPA malaza
Mifaninana vidiny avo lenta insert mitondra U ...
Fametrahana insert avo lenta miaraka amin'ny trano UCP X00
Ny trano fonenana plastika UCPH